“Kpọsaanụ Eze Ahụ na Alaeze Ya”
Ụlọ Nche—Nke A Na-amụ Amụ | Mee 2017
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
IHE SI N’EBE ANYỊ NA-EDEBE IHE OCHIE
‘Anyị Malitere Ịnụkwu Ọkụ n’Obi, Hụkwuokwa Jehova n’Anya’
N’ỤTỤTỤ Fraịdee n’ọnwa itoolu n’afọ 1922, ebe niile amalitela ikpo ọkụ ka puku mmadụ asatọ zukọtara n’otu ụlọ ezumeezu. Onyeisi oche mara ọkwa na n’oge a na-eme ihe omume a dị mkpa, onye chọrọnụ nwere ike ịpụ, ma o nweghị onye a ga-ekwe ka ọ bataghachi.
A bụrụ abụ otuto iji malite ihe omume ahụ. Mgbe a bụchara, Nwanna Joseph Rutherford gbagoro n’elu ikpo okwu. Ọtụtụ ndị anọrọ na-ele ka ha mara ihe ọ ga-ekwu. Ụfọdụ nọ na-agagharị ka ebe niile na-ekpo ọkụ. Nwanna Rutherford gwara ha ka ha nọrọ ọdụ, gee ntị. Ka ọ malitere ikwu okwu, ò nwere onye hụrụ nnukwu ákwà a fụkọtara, konye ya n’elu?
Nwanna Rutherford kwuru okwu isiokwu ya bụ: “Alaeze eluigwe dị nso.” O kwuru okwu ruo ihe dị ka otu awa na ọkara, olu ya ana-ada ka ogele n’ụlọ nzukọ ahụ. Ọ kọwara otú ndị amụma oge ochie si kwusaa banyere Alaeze ga-abịanụ n’atụghị egwu. Mgbe o kwuchawara okwu ya, ọ jụrụ, sị: “Ùnu kwetara na Eze ebube amalitela ịchị?” Mmadụ niile tiri, sị, “Ee.”
Nwanna Rutherford ji olu dara ụda kwuo, sị: “N’ihi ya, gaghachinụ ziwe ozi ọma, unu ụmụ Chineke kasị elu! Lee, Eze ahụ achịwala! Ọ bụ unu na-agbasara ya ozi. N’ihi ya, kpọsaanụ, kpọsaanụ, kpọsaanụ Eze ahụ na Alaeze ya.”
Ọ bụ mgbe ahụ ka e ji nwayọọ tọpee ákwà ahụ e konyere n’elu, ndị mmadụ ahụzie ebe e dere, “Kpọsaanụ Eze Ahụ na Alaeze ya.”
Nwanna Ray Bopp kwuru na “obi tọgburu ndị mmadụ atọgbu.” Anna Gardner kọwara otú “aka ha kụrụ si mee ka osisi ndị e ji kụọ gbamgbam maa jijiji.” Fred Twarosh kwuru, sị: “Mmadụ niile biliri ọtọ otu mgbe.” Evangelos Scouffas sịrị: “Ọ dị ka è nwere ike dọlitere anyị n’oche anyị, anyị eguzo ọtọ, anya mmiri eju anyị anya.”
Ọtụtụ ndị bịara mgbakọ ahụ ekwusawala ozi ọma Alaeze Chineke. Ma, mgbakọ ahụ mere ka ha na-anụkwu ọkụ n’obi n’ozi ọma. Ethel Bennecoff kwuru na Ndị Mmụta Baịbụl ‘malitere ịnụkwu ọkụ n’obi, hụkwuokwa Jehova n’anya.’ Odessa Tuck, bụ́ nwanna nwaanyị dị afọ iri na asatọ n’oge ahụ, lọtara mgbakọ ahụ ma kpebisie ike ịza òkù ahụ a kpọrọ, nke bụ́ “Ònye ga-eje?” Ọ sịrị: “N’oge ahụ, amaghị m ebe ọ ga-abụ ma ọ bụ otú m ga-esi eje ya ma ọ bụkwanụ ihe bụ́ ozi ahụ. Otu ihe doro m anya bụ na m chọrọ ime ka Aịzaya, bụ́ onye sịrị, ‘Lee m! Ziga m.’” (Aịza. 6:8) Ralph Leffler kwuru, sị: “Ọ bụ n’ụbọchị ahụ pụrụ iche ka a malitere ịkpọsa Alaeze ahụ a ka na-akpọsa n’ụwa niile ruo taa.”
Ka a sịkwa ihe mere na ndị Jehova anaghị echefu mgbakọ ahụ pụrụ iche e mere n’afọ 1922 na Sida Pọịnt, Ohayo, echefu. George Gangas kwuru, sị: “Mgbakọ ahụ mere ka m kpebie na agaghị m ahapụ ịga mgbakọ ọ bụla.” Ruo n’ókè o nwere ike icheta, o nweghị nke ọ hapụrụ ịga. Julia Wilcox dere, sị: “Otú obi si adị m ụtọ ma akwụkwọ anyị kwuo gbasara mgbakọ ahụ e mere na Sida Pọịnt n’afọ 1922 abụghị ihe e ji ọnụ ekwu. Ihe m na-ekwu mgbe niile bụ, ‘Jehova, i meela kwe ka m gaa mgbakọ ahụ.’”
Ọtụtụ n’ime anyị taa nwere ike icheta mgbakọ anyị gara anyị na-anaghị echefu echefu n’ihi na ọ tọgburu anyị atọgbu, meekwa ka anyị na-anụkwu ọkụ n’obi, hụkwuokwa Chineke ukwu anyị na Eze ọ họpụtara n’anya. Anyị cheta mgbakọ ahụ, anyị na-ekwukwa, sị: “Jehova, i meela kwe ka m gaa mgbakọ ahụ.”
Ihe E Dere A Na-amaghị Ihe Ọ Pụtara
E dere mkpụrụ akwụkwọ bụ́ “ADV” n’ebe niile, ma n’osisi ma n’ụlọ ma n’akwụkwọ usoro ihe omume mgbakọ ahụ. Ọ bụ mkpụrụ akwụkwọ atọ ahụ malitere okwu Bekee e si sụgharịta “kpọsaanụ.” Ndị bịara mgbakọ ahụ nọ na-eche ihe ihe ahụ e dere pụtara. *
Edith Brenisen kwuru, sị: ‘E biri mkpụrụ akwụkwọ atọ ahụ na kaadị na-acha ọcha, ya agbaa okpotokpo, a mapawachaa ya n’ọnụ ụzọ ọ bụla nakwa n’ebe ndị ọzọ. Anyị jụrụ ndị mmadụ ihe mkpụrụ akwụkwọ atọ ahụ pụtara. Ma, ọ dị ka o nweghị onye ma ihe ha pụtara, ma ọ bụkwanụ ya abụrụ na ha ma, ha achọghị ịgwa anyị.’
^ para. 14 A matabeghị ihe ihe ahụ e dere pụtara. Kemgbe ahụ, a hụbeghị foto ya n’ebe anyị na-edebe ihe ochie.
Otú E Si Si n’Aka Otu Nwanna Zaa Ekpere
Arthur Claus na Nellie nwunye ya rutere n’ebe ahụ a na-eme mgbakọ n’oge ka ha chọta ebe dị mma ha ga-anọ. Arthur kwuru, sị: “M gere ntị nke ọma n’ihe ọ bụla a na-ekwu.” Na mberede, afọ rụwara ya, ya esi ebe ahụ pụọ n’agbanyeghị na ọ ma na a gaghị ekwe ya bata ọzọ. Otu n’ime ndị na-enye ndị mmadụ oche jụrụ ya, sị: “Gịnị mere o ji bụrụ ugbu a ka ị chọrọ ịpụ?” Arthur ma na ya ga-apụrịrị.
Mgbe Arthur chọrọ ịbataghachi, ọ nụrụ ka a na-akụ aka dara ụda n’ime ụlọ ahụ, ya achọwa ebe ọ ga-anọ n’èzí na-anụ ihe na-eme n’ime ụlọ. O mechara hụ ebe ọ ga-esi rịgoro n’elu ụlọ ahụ. Ebe ahụ dị ihe dị ka amaụkwụ iri na isii n’ịdị elu. O si ebe ahụ rịgoro n’oghere a na-emechighị emechi a rụnyere n’elu ụlọ ahụ.
N’ebe ahụ, ọ hụrụ ụmụnna nwoke ụfọdụ na-amaghị ihe ha ga-eme eme ka ha nọ na-enyo nwanna ahụ na-ekwu okwu. A gwara ha gbubie eriri ndị e ji kegide ákwà e dere ihe na ya. A ga-egbubi ha niile otu mgbe. Ma iji mee otú ahụ, ha ga-achọkwu otu mma. Arthur ò ji obere mma dị nkọ? Obi ruru ha ala mgbe ha hụrụ na o ji ya. Ya na ụmụnna ndị ahụ anọrọzie n’ebe ha kwesịrị ịnọ, na-eche ihe ga-egosi na o ruola mgbe ha ga-egbubi ya. Ọ bụ mgbe Nwanna Rutherford sịrị: “Kpọọsanụ!” nke ugboro abụọ ka ha ga-egbubi eriri ndị ahụ.
Ndị nọ mgbe ihe ahụ mere kọwara otú e si jiri nwayọọ nwayọọ meghee nnukwu ákwà ahụ tụrụ àgwà e dere ihe na ya. E sere Jizọs n’etiti ya.
Ụmụnna ndị ahụ mechara gwa Arthur na e nwere ubube ha si rịgoro n’elu ụlọ ahụ nakwa na e bupụrụ ya. Ha agaghị agali chọwa mma. N’ihi ya, ha kpere ekpere rịọ Jehova ka o zitere ha nwanna ji mma. Obi siri ha ike na Jehova zara ekpere ha otú ha na-atụghị anya ya.
Otú E Si Kụọ Mkpụrụ Alaeze Mbụ na Pọtugal
Olee nsogbu ndị mbụ kwusara ozi ọma na Pọtugal meriri?
Otú E Si Jiri Okwu Ihu Ọha Kwusaa Ozi Ọma n’Ayaland
Gịnị mere Nwanna C. T. Russell ji kwetasie ike na e nwere ubi ‘ihe a kụrụ na ya charala maka owuwe ihe ubi’?
“Olee Mgbe Anyị Ga-enwe Mgbakọ Ọzọ?”
Gịnị mere mgbakọ a e nwere n’isi obodo Meksiko n’afọ 1932 ji dị mkpa?
‘Ụzọ Ọjọọ ma Ọ Bụ Ụzọ Dị Anya Anaghị Egbochi Ndịàmà Jehova’
N’ihe dị ka afọ 1928 na afọ 1933, ndị ọsụ ụzọ na-anụ ọkụ n’obi kpebisiri ike ịga kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke n’ime ime obodo ndị juru n’Ọstrelia.
E nweghị ezigbo ọganihu n’ọnụ ọgụgụ ndị nkwusa Alaeze na Briten ruo afọ iri! Gịnị mere egwú ji dagharịa?
“Ihe M Na-arụpụta Na-eme Ka E Too Jehova”
Ndị Mmụta Baịbụl aghọtachaghị na Ndị Kraịst ekwesịghị iso gaa agha n’Agha Ụwa Mbụ, ma otú ha si na-agba mbọ ime ihe ziri ezi bara ezigbo uru.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ‘Anyị Malitere Ịnụkwu Ọkụ n’Obi, Hụkwuokwa Jehova n’Anya’
IHE SI N’EBE ANYỊ NA-EDEBE IHE OCHIE ‘Anyị Malitere Ịnụkwu Ọkụ n’Obi, Hụkwuokwa Jehova n’Anya’
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2017
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2017
ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2017